» अमिरको ब्यस्तता बढ्दो ! फेरि सरौतोमा अनुबन्ध
अमिरको ब्यस्तता बढ्दो ! फेरि सरौतोमा अनुबन्ध
सिधाखबर / पछिल्लो समय निकै ब्यस्त बनेका कलाकार अमिर गौतम एक्स्न चलचित्रम सरौतोमा देखिने भएका छन् । आगामी माघ २२ गतेबाट फ्लोरमा जाने चलचित्र ‘सरौतो’को निर्माण घोषणा गरिएको छ । आइतबार राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रमका बीच चलचित्र निर्माणको अफिसियल घोषणा गरिएको हो । चलचित्रमा सुमी मोक्तानले ’डायरी’ फेम्ड अभिनेता सन्नी सिंहसँग रोमान्स गर्नेछिन् । मोडलबाट अभिनेत्रीमा छलाङ्ग लगाएकी सुमी मोक्तानलाई ‘सरौतो’ मा एक्सन अवतारमा देख्न पाइन निर्माण टिमले जनाएको छ ।
घोषणा कार्यक्रमका सार्वजनिक फस्टलुकमा समेत अभिनेत्री मोक्तानको एक्सन अवतारलाई स्थान दिइएको छ । करीब १ दशकदेखि भिडियो, सिनेमा र विज्ञापनमा छायाँकारको रुपमा सक्रिय हरी हुमागाईंले चलचित्र निर्देशन डेब्यु गर्न लागेका छन् । चलचित्रमा सुमी मोक्तान र सन्नी सिंहका अलवा विजय लामा, युवराज लामा, अमिर गौतम, अरुणा कार्कीलगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहने छ ।
उत्तम हुमागाईंको छायांकन रहने चलचित्र राघव कृष्ण गौतमको कथामा निर्माण हुन लागेकोे हो । सिनेमालाई श्री महर्जनले निर्माण गर्नेछन् । राजनराज सिवाकोटी, पुष्पन प्रधान, कमल खत्री र कोशिश क्षेत्रीको संगीत रहने चलचित्रको काठमाडौं र बारामा छायाँकन गरिने छ । सरौतोमा आफ्नो भुमिका नखुलाएका अमीरले अभिनए गरेको द म्यान फ्र्म काठमाडौं प्रदर्सनमा आउदै छ ।